'म सक्दिन कहिल्यै नभन्नु' (Never Say Never) | प्रेरक संसार
'म सक्दिन कहिल्यै नभन्नु' (Never Say Never)
आजको अवस्था जस्तो भए पनि हृदयको सपनालाई कुल्चनु हुदैन । आज हिउद छ भन्दैमा के वसन्त कहिल्यै आउदैन र ? प्रख्यात हुनुभन्दा अगाडी एल्विस प्रिस्...
आजको अवस्था जस्तो भए पनि हृदयको सपनालाई कुल्चनु हुदैन । आज हिउद छ भन्दैमा के वसन्त कहिल्यै आउदैन र ? प्रख्यात हुनुभन्दा अगाडी एल्विस प्रिस्ले ड्राइभरको नोकरी गर्थे । सामान्यस्तरको ड्राइभिङ गरिरहदा उनले मनमनै भन्थे, एकदिन म प्रख्यात संगितकार अवश्य बन्नेछु । लियोनेल मेस्सिले होटेलमा वेटरको काम गरेपनि उनलाई विश्वास थियो उनको भविष्यको बारेमा ।
चाहे काम तुच्छ होस्, सपना महान् पाल्नुपर्दछ । र, आजको वर्तमान जतिनै अन्धकार भएता पनि भोलीको उज्यालो भविष्यको लक्ष्यलाई धुलोमा मिसाउनुहुदैन । याद राख्नुहोस् रंगिचचंगी पुतली बन्नलाई हर प्युपाले विषालु झुसिलकिराको चरण पार गरेकै हुनु पर्दछ ।
प्रेरक संसार: 'म सक्दिन कहिल्यै नभन्नु' (Never Say Never)